Perinatal Ukunakekela Factory, Suppliers | China Perinatal Ukunakekela Abakhiqizi
Ikhaya» imikhiqizo » Isisetshenziswa Medical » Ukunakekela Perinatal
Sidale i-YXK-2000G iyunithi nge eziphambili thermoregulation uhlelo isiguli neonate ngoba engcono yokunakekela, kanye humidifier Servo-elawulwa ukuphakela emoyeni ukhululekile ngaphakathi incubator ne air Isivinini ongaphakeme. Isiphathi ezilinganiselwe ukuhlinzeka iziguli umswakama emoyeni isidingo nini futhi kuphi. Umklamo enemisebenzi kodonga olubhangqiwe olungasensimini kuvimbela evaporative nokushisa ezivamile uphawu epholile Ufika wayebakhathalela ngokwanele.
I YXK-2000GA futhi kuyinto enembile lokushisa isibonisi eziphambili thermoregulation uhlelo nabanakekeli, futhi ziqashwe nomswakama olunembile ngo-40% -80% RH ngaphakathi iyindawo.
Sidale isimo kwemvelo efanelekayo nesineke neonate by eziphambili thermoregulation uhlelo, futhi ikhono lokulawula ukushisa kanye umsindo nokunye, inikeza ukhululekile, kulula ukuyisebenzisa nabanakekeli.
Umbono wethu okulonda eziphambili thermoregulation uhlelo isiguli neonate ngu umuzwa wethu onqala emtholampilo. I YXK-6G uyisibonelo sethu eziyisisekelo kodwa compact design incubator igcina neonate ethambile endaweni esiqinile engcono yokunakekela.
Njengoba omunye phezulu yethu usana incubator akuyona elula ukuxhumana incubator futhi phototherapy amayunithi. Ukuhlanganiswa eyinkimbinkimbi amandla okungena osanda kuzalwa nge hyperbilirubinemia sasivunyelwa nxazonke blue-ray phototherapy ngaphakathi kwemvelo ezifanele, uvikelekile futhi enokwethenjelwa. Njalo imininingwane kuhlanganise ibanga phakathi phototherapy amayunithi kanye nesineke, okukhanyisa umfutho nokunye Imiphumela kusuka ucwaningo esiqhubekayo esiqinile futhi okuhlangenwe nakho nesineke yakho esanda kuzalwa ngesikhathi sithuthukise enifeza nejoka ukuvikela usana nge best ukunakekelwa kungenzeka.
Usana phototherapy yethu incubator 8502D igcina iziguli neonate e indawo ezinzile futhi inikeza engcono jaundice yokwelapha. Umklamo phototherapy incubator ivumela iziguli ethambile abadinga ukunakekelwa okungcono ukhululekile kanye nabanakekeli abasebenzisa iyunithi kalula futhi friendly okusekelwe usana incubator yethu chungechunge.
Imodi 8502S nguye eziyisisekelo 8502 uchungechunge nge umsebenzi incubator kwezinsana kanye nokwelashwa phototherapy for iziguli neonate ne-jaundice. Ngaphezu kwalokho, iyunithi ongabonisa nemingcele olunembile, emoyeni lokushisa, isikhumba lokushisa kanye alamu multi nge amazinga amathathu.
Njengoba enemisebenzi ukunakekelwa evulekile umnikelo uhlelo izixazululo ungakwazi zincike, le FXQ4A kwenza umsebenzi wakho lula ngenkathi ugcina izinqubo yakho ukhululekile. Le yesikhulumi ukwelashwa ikuvumela ukuba ngokushesha ephendula isiguli sakho ephezulu njengoba ihlanganiswe konke okudingayo ukuze thermoregulation nokusekelwa zokuphefumula ngesikhathi yokwelapha yokusiza umuntu ukuba aphefumule. Ngaphezu kwalokho, umklamo wesistimu akhishwa iminyaka yethu nakho ukuba baphikelele ulandele umqondo sokupha iziguli yakho isengcupheni ukunakekelwa okungcono.